FAQ - Gemic
Mila mamerina vatosoa? gem.agency mahatonga azy ho Mora.
Miezaka izahay mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ambonin'ny zavatra rehetra. Raha ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nahazoanao ny vatosoa (vatanao) dia tsy nahafa-po anao ny baikonao, azonao atao ny mamerina izany aminay amin'ny toe-javatra tany am-boalohany sy tsy simba. Ireo vatosoa dia azo averina ao amin'ity fizahana mandritra ny 30 andro ity.
Azafady alefaso mailaka GEMIC ho an'ny Return Authorization Numbernihazakazaka) sy torolàlana famerenana fanampiny.
NB: Naverina amintsika ny baiko tsy misy RAN ary averina any amin ilay mpandefa. Ny fonosana fividianana sy ny fandefasana entana dia andraikitry ny mpandefa. Ny varotra rehetra dia tapitra aorian'ny 30 andro (ny entana miverina dia tokony hatao sonia ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fotoana ahazoana ny baiko).
Azafady mba lavina ny fandefasana ny paositra, raha te-hanafoana baiko ianao rehefa avy nampidinina, fa alohan'ny nanaterana azy io. Raha nolavina ny baiko dia tompon'andraikitra amin'ny vidiny feno ireo mpanjifa raha very ary ireo fiampangana sy adidy rehetra amin'ny alàlan'ny fiverenany.
Any amin'ny firenena maro, ny fandefasana fangatahana dia mety iharan'ny haba sy hetra ampiharina. Ireo mpividy dia tompon'andraikitra amin'ny fomba amam-panao, hetra sy adidy rehetra. Ny fiverenana natao noho ny voalaza etsy aloha dia tsy azo omena alàlana.
** Ny famerenam-bola rehetra dia atao amin'ny alàlan'ny fomba mitovy mitovy amin'ny karama voaray. Ny vidin'ny fandefasana, ny fiantohana sy ny carte de crédit dia tsy averina. Tsy misy ny famerenam-bidy. Tsy nisy soloina fanolorana.
Fanontaniana fanampiny? Mifandraisa aminay
Security sy ny Privacy
GEMIC dia miahiahy momba ny fiarovana sy fiarovana ny mpanjifanay. Izahay dia miantoka fa azo antoka ny fizotry ny fifanakalozana ary azo antoka ny mombamomba ny mpanjifanay.
Ny fampahalalana rehetra momba ny fandoavam-bola sy ny carte de crédit dia apetraka amin'ny pejy azo antoka amin'ny alàlan'ny PayPal. Tsy azonay jerena ny fampahalalana momba ny carte de crédit na ny fampahalalana ara-bola. Ny fampahalalana momba ny fiarovana amin'ny PayPal
GEMIC Laboratory dia manaja ny mombamomba anao ao amin'ny tranonkalany. Ny adiresy mailakao dia azo ampiasaina vetivety hamoronana mailaka na baiko.
Tsy hivarotra ny adiresy mailaka, ny laha-fitadiavana, na fampahalalana hafa.
Mampiasa cookies an'ny browser ny GEMIC hanatsarana ny fitsidihanao sy hahafahanay ny sarety fiantsenana an-tserasera. Tsy misy mombamomba anao voatahiry ao anaty cookies. Ny cookies dia tsy maintsy avela hiditra amin'ny endri-javatra rehetra amin'ny tranokalanay.
Raha te hahalala bebe kokoa dia mifandraisa aminay.
Vato fanamarinana vatosoa
Azonao atao ny mandefa taratasy fanamarinana rehefa manampy zavatra ao anaty sarety ianao. Mba hanaovana izany, tsindrio ny rohy "Ampio taratasy fanamarinana vatosoa ho an'ity entana ity" ao amin'ny pejy amin'ny antsipirihany momba ilay zavatra "atao anaty harona" bokotra. Hanokatra ny safidy fanamarinana io.
Ny entana rehetra dia azo antoka ao amin'ny GEMIC. Izahay dia manome antoka fa hahazo izay aloanao hatrany ianao.
Ny vatosoa rehetra ao amin'ny GEMIC dia azo antoka fa ho toy ny voalaza. Ny mpiasanay manam-pahaizana dia mandinika tsara sy mandrefy ny vatosoa tsirairay.
Ny vatosoa rehetra avy amin'ny GEMIC dia vatosoa voajanahary noforonin'ny Tany. Tsy mifampiraharaha amin'ny "vatosoa" sentetika na noforonin'ny laboratoara izahay.
Inona no hitanao, inona no azonao
Ny sary vatosoa tsirairay dia ny tena vatosoa azonao. Tsy mampiasa sary misy sary na sary mitovitovy amin'ny vato samy hafa izahay.
Ny teboka rehetra eo ambony dia tohanan'ny antoka 100% miverina. Mijoro eo akaikin'ny firavantsika isika, raha mijoro eo anilan'ny mpanjifanay.
Safidy sy lalàna momba ny fandoavam-bola
Azo antoka, azo antoka ary mora ny laboratoara GEMIC.
Manome ireto fomba manaraka fandoavam-bola manaraka ireto isika amin'ny famenoana ny baikonao:
Aloa amin'ny alàlan'ny carte de crédit amin'ny alàlan'ny PayPal (tsy mila kaonty PayPal)
PayPal dia manaiky an'i Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, EuroCard, Maestro ary American Express. Ny fampahalalana momba ny fiarovana amin'ny PayPal.
Handoa amin'ny kaonty PayPal anao
Mpikambana PayPal efa voamarina izahay.
Fanamarihana: Raha tsy manana kaonty ianao dia afaka manokatra kaonty vaovao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny làlan-java-mandeha amin'ny efijery.
Mandoa amin'ny fifindran'ny Western Union
Rehefa mandoa ny fandefasana ny Western Union dia hotehirizina mandritra ny telo andro ny entanao. Azafady alefaso aminay ny laharan'ny fifanakalozana ara-bola (MTN #) momba ny fifindranao. Vantany vao voaray ny vola dia handrindranao ny baikonao.
Fanamarihana: Ny saram-pitaterana dia tsy tokony hesorina amin'ny vola efa voaray.
Aloa amin'ny fandefasana banky mivantana
Rehefa mandoa amin'ny fandefasana banky mivantana dia hotehirizina mandritra ny telo andro ny entanao. Azafady mba alefaso aminay ny code refa fangatahana famindram-bola rehefa avy nandoa vola ianao. Vantany vao voaray ny vola dia handrindranao ny baikonao.
Vantany vao vonona ny hivoaka ianao:
Avereno jerena ny sarety fiantsenanao ary safidio ny fomba fandefasanao. Manolotra ireto fomba roa sy sara manaraka ireto izahay; Fedex (3-4 andro)
Airmail iraisam-pirenena manerantany (10-21 andro)
Tsindrio "tohizo ny fizahana" ary ampidiro ny adiresy fandefasanao.
Safidio ny fomba fandoavanao vola ary kitiho ny "mandoa izao".
Ampidiro ny fampahalalana momba ny faktioranao, na pirinty ny torolàlana momba ny famindrana vola eo amin'ny efijery.
Vantany vao napetraka tamim-pahombiazana ny kaontinao dia hahazo fanamafisana mailaka avy aminay ianao amin'ny adiresy mailakao.
Fanamarihana: Azafady, alao antoka fa ampio ny adiresy mailakao mba hahazoana antoka fa afaka mandray ny mailaka fanamafisana sy fandefasana entana izahay. Raha tsy mahazo mailaka avy aminay ianao dia azafady mba jereo tsara ny spam-nao na ny mailaka mailaka fampirimana.
Ny carte de crédit sy ny fandoavam-bola PayPal dia hampandoavina vola amin'ny vola rehetra. Ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Western Union na amin'ny alàlan'ny famindrana banky dia tsy maintsy alefa amin'ny dolara amerikana.
Rehefa mifidy vola hafa ankoatry ny dolara amerikana, ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny anio dia hampiasaina hanovana ny vidiny aseho.
PayPal sy ny banky fanodinanao (banky manome carte de crédit) dia hampiasa ny tahan'ny fifanakalozam-bola ananany hanovana ny vola, noho izany, ny fiampangana amin'ny vola voafantina dia tsy hitovy amin'ny vidiny aseho ao amin'io tranokala io.
Ny sandam-bola aseho fotsiny no takian'i GEMIC. Ny sarany fanampiny dia miankina amin'ny an'i PayPal, ny carte de crédit anao izay manome ny politikan'ny banky na ny Western Union.
Raha manana olana amin'ny fandoavam-bola ianao na te hiresaka safidy hafa momba ny fandoavam-bola, aza misalasala Mifandraisa aminay.
Azafady jereo eto ambany ny safidinay nalefa:
Fandefasana Express - USD 35
Ny fandefasana entana mazàna dia maharitra 3-4 andro handefasana azy ary azo arahana amin'ny Internet isaky ny mandeha. Ny parsela dia miantoka fiantohana tanteraka. Ilaina ny sonia rehefa hatolotra. Ny alatsinainy hatramin'ny zoma ho an'ny ankamaroan'ny firenena. Tsy misy boaty PO (afa-tsy ny UAE, Saudi Arabia ary Koety), ny adiresy APO na FPO no azo ampiasaina.
Fanamarihana: Raha manana 'sonia amin'ny rakitra' ianao dia miantso ny EMS mba hanafoanana io fanomezan-dàlana io. Ny fonosana izay alefa tsy misy sonia, noho ny 'sonia amin'ny fisie' dia tsy azon'ny mpitantana fiantohana anay atao.
Mailaka voasoratra anarana - USD 7
Manolotra mailaka voasoratra anarana amin'ny firenena 120 mahery izahay. Ny mailaka voasoratra anarana dia miantoka fiantohana hatramin'ny USD 200. Ny fandefasana dia mandany 10-21 andro fiasana ary mitaky sonia amin'ny fandefasana azy. Tsy misy fanaterana amin'ny Alahady.
Ny vatosoa rehetra aseho ho 'misy' dia efa tahiry ary vonona ny halefa eo noho eo. Ny baiko dia voahodina ao anatin'ny 1 andro fiasana alatsinainy - zoma (tsy ankanavaka ny fialantsasatra)
Any amin'ny firenena maro, izay nambara fa ny fandefasana dia ampiharina amin'ny sarany sy ny hetra. Maharitra ela kokoa ny mailaka voarakitra, fa manalavitra ny sarany fanampiny. Faly izahay fa alefa toy fanomezana, nefa tsarovy fa tsy voafehinay amin'ny fiampangana fanampiny mety hitranga amin'ny firenenao.
Fanamarihana: Ny hetra na hetra amin'ny hetra dia andraikitry ny mpividy. Ny fandefasana entana izay nolavina noho ny fiampangana toy izany dia tsy azo ekena. Azonao atao ny mifandray aminay raha mila fikarakarana manokana ianao.
Ny fonosana rehetra avy amin'ny GEMIC dia misy invoice feno. Mba miangavy re Mifandraisa aminay alohan'ny hametrahana ny baiko raha mila faktiora manokana ianao na tsy misy faktiora mihitsy.
Scale Gemstone Clarity Scale
GEMIC dia mampiasa izao famaritana mazava izao rehefa misy vatosoa:
IF : Loupe madio - tsy misy kilema anatiny; tsy misy fampidirana.
VVS : Saika madio loupe - fampidirana kely dia kely; fampidirana zara raha hita ambanin'ny fanamafisana 10x.
VS : Madio maso - fampidirana kely dia kely; ny fampidirana kely dia mety ho hitan'ny maso voaofana na ambanin'ny fanamafisana 10x.
SI : Ampidirina kely - azo zahana amin'ny maso mitanjaka ny fampidirana kely.
I : Tafiditra ao - ny maso dia azo zahana amin'ny maso mitanjaka.